ENUGWU: NDI KEKE NA-ACHỊLIRI UGWUANYỊ AKA ELU – hoo!haa!!
Ndị na-anya ụgbọala nwere ụkwụ atọ eji keke mara n’Enugwu nakwa ndi ọkwọ ụgbọala tagizi etoola aka na-achị steeti Enugwu bụ Ifeanyị Ugwuanyị maka ọchịchị ọma ya nke mere na ha ejighịzị anya mmiri arụ ọrụ ha na steeti Enugwu.
Ha sịrị na site n’ọchịchị obi ọma Ugwuanyị, na ebelatagoro ha ụmụ ọgbata-uhie ha na-enwebu n’ọrụ ha.
N’ozi ya kwụrụ iche, onye isi oche ndi ọrụ ụgbọala keke n’Enugwu bụ Benjamin Ika kelere onye ọchịchị a bụ Ugwuanyị maka ige ntị were labata aririọ ha ka enwee akwụkwọ ikike maka ndi na-akwọ ụgbọala keke. Ika kwuru na onye ochịchị a gbatara ha mkpu enyemaka mgbe ọ kacha dị ha mkpa. O kwuru na akwụkwọ ikike a bụ nke ha jikọrọ aka ọnụ ma kwue ka enye ha, mere ka ọrụ ha na-aga larịị tinyekwara ịbenatara ha ọnụ ego ha na-emefu n’ọrụ.
Ọ sịrị na tupu enye ha akwụkwọ ikike a, na ha na ndi ọgba tim tim ejiri ọkada were mara na-emefuchaa ego ruru puku naira iri na asatọ nakwa puku naira iri abụọ na abụọ iji gbata akwụkwọ ikike ndi ọkwọ ụgbọala. Mana kịta na ọ bụzị sọsọ puku naira isii ka ha na-akwụ iji gbata akwukwọ ikike nke ha a. Okelere Ugwuanyị maka nke a.
N’aka nke ọzọ ndi ọrụ ụgbọala tagizi n’Enugwu gara kele Ugwuanyị n’obi gọọmenti Enugwu, bụ ebe ha nọrọ kwue hoohaa, n’ọbụ onye ọchịchị a bụ Ugwuanyị bụ ebum n’obi ha dịka onye ga-achị steeti Enugwu nke ugboro abụọ. Ha toro ya maka na ọ na-enye ha ndụm ọdụ dịka nna, tinyekwara na ọchịchị ya bụ ome nke ahụrụ n’anya.
Ọ bụ ụnyahụ ka gọọmenti steeti Enugwu mere emume iji cheta na ọ dịla afọ iri abụọ na asaa ekewapụtara steeti Enugwu.
N’ozi ya, ode-akwụkwọ steeti Enugwu bụ Dọkịnta G. O. C. Aja kelere Chukwu maka odudu ya kamgbe yabụ njem malitere, ma tokwa ụmụ amala Enugwu maka ezigbo ndọnye-ukwu ha nakwa ekpere ha, nke mere ka udo na ezigbo ọchịchị dị na steeti Enugwu.
Okelekwara onye isi ala bụ Buharị, onye osote ya bụ osinbajo nakwa ndi ọchịchị ndi ọzọ bụ ndi na-etinye aka maka iweta ezgbo ọganiru na steeti Enugwu.
Na mmechi okwu ya, o kelere ka ha ra bụ ndi sitere na ezigbo echiche ha na uchu ọrụ ha cheputa maka ikewapụta steeti Enugwu. O chefughịkwa ndi n’ime ha lagoro mụọ.
Previous Post: ỤMỤ NNỤNỤ
Next Post: ENUGWU: NDI NỌ EZUMIKE NKA ETOOLA UGWUANYỊ